October 2020 – Kiran Kumar
October 22, 2020 October 22, 2020 Kiran Kumar
छोडेर जानेहरूयस्तरी जान्छन् कि –एउटा सिंगो संसार लिएर गए जस्तोबाँकी केही आफूसँग नभए जस्तोहाँसो खुशी लुटेर लगे जस्तोबाँच्ने बाटो सकिए जस्तो । मनबाट खुशी झिकेपछिमन शान्त हुनु पर्ने होइन र ?तर, किन पिरमा पिरोलिन्छ ?किन दुःखमा रुमल्लिन्छ, मन ? मनलाई Read More …
poetrychhodera janeharu, kavita, kirrkur, literature, playingwithwords, poetry, thoughtsLeaveacomment
October 16, 2020 October 16, 2020 Kiran Kumar
अँध्यारो छाइसक्न सक्छवा, म नआउन पनि सक्छु ।मलाई पर्खनु पर्दैन ।तिमी आफ्नो बाटो हिँड । रात अवश्य पर्नेछयसभित्र म हराउन सक्छुआफैँलाई नभेट्न सक्छु ।मलाई पर्खनु पर्दैन ।तिमी आफ्नो बाटो हिँड ।। मैले त बाटो नै भुल्न पनि सक्छुबिर्सन सक्छु आफैँलाईबिर्सन Read More …
The Forty Rules of Love is written by Elif Shafak, one of Turkey’s most accomplished authors. The novel is about the story of Jalaluddin Rumi, the universally acclaimed 13th century poet, Islamic Scholar and Sufi mystic, through whose friendship with Read More …
Book Viewbook, book view, Elif Shafak, Forty Rules of Love, Fumi, kirrkur, Motivational, novel, quote, Shams of Tabriz, SpiritualLeaveacomment
October 10, 2020 October 10, 2020 Kiran Kumar
सबथोक हरायो ।तिमी हरायौतिम्रा याद हराएम रित्तो भएँ । खोज्न जाउँ कहाँलागूँ दिशा कुन ? तिमीलाई खोजूँ कितिम्रा याद खोज्न थालूँ ?? तिमीलाई रोजूँ कितिम्रा यादलाई रोजूँ ?? म त एउटा निर्णयमा पनिपुग्न सक्दिन ।म रित्तो भएँ ।। मसँग चाहना Read More …
poetrybigriyako jindagi, kirrkur, poetry, बिग्रिएको जिन्दगीLeaveacomment